Kazakhstan: Tantaran’ny Krizy teo amin’ny tontolon’ny blaogy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 14 Marsa 2009 15:05 GMT
Manohy manaraka akaiky ny toe-draharaha ao amin’ny firenena sy ny fikasan’ny governemanta hamerina ny toe-karena sy ny tontolo hafa eo amin’ny fiainana ara-tsosialy ho “fehezina amin’ny fomba mivantana (fanaraha-maso an-tanana)” ireo mpamaham-bolongana ao Kazakhstan
Mitanisa I Dass, minisitry ny asa izay nanambara tao amin’ny fivoriamben’ny governemanta fa manodidina ny 900 000 no isan’ny olona atahoarana fa ho tafiditra ao anatin’ny tsy fananan’asa, 3,4 tapitrisa no salan’isa fantatra fa efa tafiditra ao anatin’izany, 11,4 tapitrisa kosa no isan’ireo izay tsy ho tratran’ity tsy fananan’asa ity. Io antontan’isa io kosa anefa dia toa ohatrin’ny hafahafa ihany, izany dia araka ny fahitana ny ankamroan’ireo tsikera avy tao anatin’ny lahatsoratra. Tsy ny vahoaka mamokatra ihany no voaisan’ny Ministra tao anatin’ny antontan’isa, fa tafiditra tao daholo ireo olom-pirenena ao Kazakhstan, anisan’izany ireo zaza vao teraka sy ireo be antitra. Ny isan’ny vahoaka mamokatra dia 7,8 tapitrisa, izay midika fa mihoatra ny antsasak’izany isa izany no antontan’isan’ireo izay ho very asa.
Nomen ’I Slavoyara ny tsikera manadihady ireo drafitry ny governemanta mametraka ny toe-bolan’ny fisotron-dronono ho entina hamatsiana ny 70%n’ny zavatra tena ilaina ho amin’ny tetik’sa fanajariana ny tany:
Ny ankamaroan’ny toe-bolan’ny fisotron-dronono dia hilevina ao anatin’ny savovon’ny tetik’asa fifanarahana ao amin’ny firenena. Fantantsika tsara hoe inona no mitranga matetika amin’ny “tetik’asa fanajariana govana” toy itony – misy mangalata ny vola, misy mizarazara ary tsy hita popoka avy eo…..
Etsy andanin’izany, ankoatrin’ny fitsikerana ny tsy fisian’ny mangarahara eo amin’ny fitantanta ny raharahan’ny firenena, dia nanome baiko ny praiministra hampihena ny karaman’ireo mpitantana ambony eny amin’ny orinasa nasionaly sy ny eny amin’ny bankim-pirenena mba ho tonga mitovy lanja tahaka ny azy ny karaman’izy ireo, izany dia mitentina ho 700 000 tenge (4 698 dollar). Manoratra I Megakhuimyak [ru]:
Ny karaman’ny mpitantana ambony ao amin’ny Samruk-Kazyna Soverign Wealth Fund dia mahatratra ho 8 054 dollar. Ny mpitantana ambony ao amin’ny banky dia mikarama manodidina ny 20 ka hatramin’ny 25 000 dollar isam-bolana. Mitomany ireo olona ao amin’ny orinasa nasionaly… etsy andanin’izany, ny vahoaka Kazakhstana tsirairay dia afaka mampitaha ny karamany manoloana ny an’I Praiministra.
Ny fivelaran’ny fihetsika entin’ny governemanta mahakasika ny toe-karena, eny fa na dia tsy dia sarotra fantarina aza fa hoe atao hanasitrana no antony anaovana izany, dia mitarika tahotra tsy ho an’ny mpahay toe-karena tsy miankina irery ihany fa ho an’ireo intelligentsia (ireo ikoizan’ny fanadihadiana). Milaza I Poet dergachew [ru]:
Tsy mpanao politika aho, kanefa tsy nisy zavatra tsara akory ny vokatry ny fampodiana ny fitatanana ny fandraharahana goavana eo ambanin’ny fifehezan’ny fanjakana (nationalization) izay misy eto amin’ny fireneko ankehitriny. Marina fa ny governemanta ihany aloha eto no afaka milalao ny tsena satria mitahiry ny fidiram-bola azo avy amin’ny fitrandrahana harena an-kibon’ny tany izy, kanefa hatreto aloha dia fantatra ny zava-misy fa ny fandraharahana aton’ny olon-tsotra no miroborobo kokoa raha oharina amin’ny an’ny governemanta.
Miahiahy mafy mahakasika ny fivelaran’ny governemanta eo amin’ny fifehezana ny fanaovan-gazety I a –strekoza:
Lafo toy ny voanjo [tamin’ireo antokon’ny mpitondra fanjakana] ny [gazety] antsoina hoe “Liter” ary I “Aikyn”. Efa teraka hanakiana/ny tsy hahita lafi-tsarany foana aho, noho izany dia ity no mba eritreritro: hatramin’ny nahasarotra ny fankasitrana nentin’ny antokon’ny mpitondra fanjakana, izay hita mitranga ankehitriny, dia ho vaokorotana avokoa ny zava-drehetra – Hanomboka hifanjinja tsikelikely amin’izay ireo mpitantan-draharaha, ny fanaovan-dokambarotra dia hifindra gazety hafa indray, ho tapaka/hihena ny karaman’ireo mpanao gazety ary avy hianatra fomba famindra vaovao hafa izy ireo eo amin’ny lahatsoratra ataony…. Dia toy izay ny fiasan’ny fitantanana vaovao, fa ny governemanta fotsiny no hita fa miditra loatra ho amin’izany.
Manao vazivazy zary tenany mahakasika ny zotra iraisan’ny krizy sy ny fomba filazan’i Mikhail Bulgakov izay fanta-daza I Pulementchizza:
Ao anatin’ny trano fidiovana ny krizy. Tamin’ny voalohany dia fampiasantsika ny taratasy fifirana misy sosona anankiroa miampy famafan-tanana ao anatin’ny trano fidiovana. Ankehitriny kosa dia taratasy fifirana tsotra/mora vidy no ampiasaintsika, amin’izay indray aza tsisy intsony ny famafantanana. Ohatry ny hitako sahady fa afaka volana roa na maromaro dia ho voatapatapaka ny taratasin-gazety.